मत्ती १३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१३ त्यस दिन येशू घरबाट निस्केर समुद्रको किनारामा बसिरहनुभएको थियो। २ अनि ठूलो भीड उहाँको वरिपरि जम्मा भयो। त्यसैले उहाँ डुङ्गामा त्यसमा चढेर बस्नुभयो अनि सबै भीड भने किनारामा उभिरहेका थिए। ३ त्यसपछि उहाँले दृष्टान्तहरू चलाएर तिनीहरूलाई धेरै कुरा भन्नुभयो: “हेर, एक जना बीउ छर्ने मानिस बीउ छर्नलाई निस्क्यो। ४ बीउ छर्दै जाँदा केही बीउ बाटोको छेउछाउमा परे अनि चराहरू आएर ती खाइदिए। ५ अरूचाहिं चट्टानमा परे जहाँ त्यति माटो थिएन अनि माटो गहिरो नभएकोले ती तुरुन्तै टुसाइहाले। ६ तर घाम लागेपछि ती ओइलाए अनि जरा राम्ररी गाडिन नपाएकोले सुकिहाले। ७ अझ अरूचाहिं काँडाहरूको बीचमा परे अनि काँडाहरू बढ्दै जाँदा ती निसास्सिए। ८ बाँकी अरू भने असल माटोमा परे अनि कुनैले सय गुणा, कुनैले साठी गुणा अनि कुनैले तीस गुणा फल फलाउन थाले। ९ जसको कान छ, त्यसले सुनोस्।” १० त्यसैले चेलाहरू आएर उहाँलाई भने: “तिनीहरूसित कुरा गर्दा तपाईं किन दृष्टान्तहरू चलाउनुहुन्छ?” ११ उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो: “तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यको पवित्र रहस्य बुझ्ने मौका दिइएको छ तर ती मानिसहरूलाई त दिइएको छैन। १२ किनकि जससित छ, त्यसलाई अझ धेरै दिइनेछ र त्यससित प्रशस्त हुनेछ तर जससित छैन, त्यससित भएको पनि खोसिनेछ। १३ त्यसैले म तिनीहरूसित कुरा गर्दा दृष्टान्तहरू चलाउँछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन्‌ तर देख्दैनन्‌, सुन्न त सुन्छन्‌ तर ठम्याउँदैनन्‌, न त तिनीहरू त्यसको अर्थ नै बुझ्छन्‌। १४ यशैयाको भविष्यवाणी तिनीहरूमाथि पूरा हुन्छ, जहाँ यसो भनिएको छ: ‘सुनेर पनि तिमीहरूले कुनै हालतमा बुझ्नेछैनौ अनि हेरेर पनि तिमीहरूले कुनै हालतमा देख्नेछैनौ। १५ किनकि यी मानिसहरूको मन बोधो भएको छ र तिनीहरूको कान बाक्लो भएको छ अनि तिनीहरूले आफ्नो आँखा चिम्लिएका छन्‌ नत्र त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्नेथिए, कानले सुन्नेथिए, बुझेर मनमा लिनेथिए र मकहाँ फर्केर आउनेथिए अनि म तिनीहरूलाई निको पार्नेथिएँ।’ १६ “तर तिमीहरू आनन्दित हौ किनभने तिमीहरूका आँखाले देख्छन्‌ र तिमीहरूका कानले सुन्छन्‌। १७ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, धेरै भविष्यवक्ताले र परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूले तिमीहरूले देखिरहेका कुराहरू हेर्ने इच्छा गरेका थिए तर देख्न पाएनन्‌ अनि तिमीहरूले सुनिरहेका कुराहरू सुन्ने इच्छा गरेका थिए तर सुन्न पाएनन्‌। १८ “अब तिमीहरू बीउ छर्ने मानिसको दृष्टान्तको अर्थ सुन। १९ यदि कसैले राज्यको वचन सुन्छ तर त्यसको अर्थ बुझ्दैन भने त्यो दुष्ट* आउँछ र उसको मनमा जे छरिएको थियो, त्यो खोसेर लैजान्छ; बाटोको छेउछाउमा छरिएको यही हो। २० चट्टानमा छरिएकोचाहिं त्यो हो, जसले वचन सुनेर खुसीसाथ तुरुन्तै स्वीकार्छ। २१ उसको आफ्नै जरा नभए तापनि केही समयसम्म रहिरहन्छ तर वचनको खातिर सङ्कष्ट वा खेदो आउने बित्तिकै ठेस खान्छ। २२ काँडाहरूको बीचमा छरिएको यही हो, जसले वचन सुन्छ तर यस संसारको* फिक्री र धनसम्पत्तिको भ्रामक शक्तिले गर्दा वचन निसासिन्छ र उसले फल फलाउँदैन। २३ असल माटोमा छरिएको यही हो, जसले वचन सुन्छ र त्यसको अर्थ बुझ्छ अनि फल पनि फलाउँछ, कुनैले सय गुणा, कुनैले साठी गुणा अनि कुनैले तीस गुणा।” २४ उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै अर्को दृष्टान्त सुनाउनुभयो: “स्वर्गको राज्य यस्तो मानिसजस्तो हो, जसले आफ्नो खेतमा असल बीउ छऱ्यो। २५ मानिसहरू सुतिरहेको बेला उसको शत्रु आयो र गहुँको बीच-बीचमा सामा छरेर गयो। २६ जब बाला निस्केर गेडा लाग्यो, तब सामा पनि देखा पऱ्यो। २७ त्यसैले घरमालिकका दासहरू आएर उसलाई यसो भने: ‘मालिक, हजुरले आफ्नो खेतमा असल बीउ छर्नुभएको होइन र? त्यसोभए सामा कहाँबाट आयो?’ २८ उसले तिनीहरूलाई भन्यो: ‘शत्रुले त्यसो गरेको हो।’ तिनीहरूले उसलाई भने: ‘त्यसोभए तपाईं के चाहनुहुन्छ, के हामी गएर उखेलौं?’ २९ उसले भन्यो: ‘भो, पर्दैन। नत्रता तिमीहरूले सामासँगसँगै गहुँ पनि उखेल्नेछौ। ३० बाली काट्ने बेलासम्म दुवैलाई सँगै बढ्न देओ। अनि बाली काट्ने बेला म खेतालाहरूलाई भन्नेछु, पहिला सामा बटुलेर जलाउनलाई बिटा बाँध र त्यसपछि गहुँ जम्मा गरेर मेरो धनसारमा राख।’ ” ३१ उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै अर्को दृष्टान्त सुनाउनुभयो: “स्वर्गको राज्य रायोको एउटा दानाजस्तो हो, जसलाई एक जना मानिसले आफ्नो खेतमा रोप्यो। ३२ यो वास्तवमा बीउहरूमध्ये सबैभन्दा सानो हो तर बढेपछि सागपातहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुन्छ र रूख बन्छ। अनि आकाशका चराचुरुङ्गी आएर यसका हाँगाहरूमा बास बस्छन्‌।” ३३ उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त पनि सुनाउनुभयो: “स्वर्गको राज्य खमिर जस्तो हो, जसलाई एक जना स्त्रीले तीन भाँडो* पीठोमा मिसाई र पूरै पीठो खमिरा नहोउन्जेलसम्म राखिछोडी।” ३४ येशूले यी सबै कुरा दृष्टान्त चलाएर भीडलाई बताउनुभयो। वास्तवमा, विनादृष्टान्त उहाँ तिनीहरूसित कुरा गर्नुहुन्नथ्यो। ३५ यसरी भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको यो वचन पूरा भयो: “दृष्टान्तहरू चलाएर म आफ्नो मुख खोल्नेछु, प्रारम्भदेखि छिपेको कुरा म प्रकट गर्नेछु।” ३६ भीडलाई बिदा गरिसकेपछि उहाँ घरभित्र पस्नुभयो। अनि चेलाहरू उहाँकहाँ आएर भने: “खेतको सामाको दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्।” ३७ उहाँले भन्नुभयो: “असल बीउ छर्ने व्यक्ति मानिसको छोरा हो; ३८ खेत संसार हो; असल बीउ राज्यका सन्तान हुन्‌; तर सामाचाहिं त्यस दुष्टका* सन्तान हुन्‌; ३९ ती छर्ने शत्रु दियाबल हो। बाली काट्ने समयचाहिं युगको आखिरी समय हो अनि खेतालाहरूचाहिं स्वर्गदूतहरू हुन्‌। ४० त्यसकारण, जसरी सामा बटुलेर आगोमा जलाइन्छ, यस युगको आखिरी समयमा पनि त्यस्तै हुनेछ। ४१ मानिसको छोराले आफ्ना स्वर्गदूतहरू पठाउनेछ र तिनीहरूले ठेस लाग्ने कुरा* र कुकर्मीहरू सबैलाई उहाँको राज्यबाट बटुल्नेछन्‌ ४२ अनि आगोको भट्टीमा हालिदिनेछन्‌, जहाँ रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ। ४३ परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरू भने त्यसबेला आफ्नो बुबाको राज्यमा सूर्यझैं चम्किनेछन्‌। जसको कान छ, उसले सुनोस्। ४४ “स्वर्गको राज्य खेतमा लुकाइराखेको धनजस्तो हो, जो एक जना मानिसले फेला पारेर लुकाउँछ अनि ऊ खुसी हुँदै जान्छ र आफूसित भएको सबै थोक बेचेर त्यो खेत किन्छ। ४५ “साथै, स्वर्गको राज्य असल मोती खोज्दै हिंड्ने व्यापारीजस्तो हो, ४६ जसले उच्चकोटिको एउटा मोती फेला पारेपछि गएर आफूसित भएको सबै थोक तुरुन्तै बेच्यो र त्यो किन्यो। ४७ “अनि स्वर्गको राज्य समुद्रमा हालिएको ठूलो जालजस्तो हो, जसले विभिन्न किसिमका माछाहरू बटुल्छ। ४८ जाल भरिएपछि मानिसहरूले तानेर किनारामा निकाले अनि बसेर असल माछाहरू जति भाँडामा जम्मा गरे तर काम नलाग्ने माछाहरू जति फ्याँकिदिए। ४९ यस युगको आखिरी समयमा पनि यस्तै हुनेछ: स्वर्गदूतहरू गएर परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूको माझबाट दुष्टलाई अलग पार्नेछन्‌ ५० अनि आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिनेछन्‌, जहाँ रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ। ५१ “के तिमीहरूले यी सबै कुराको अर्थ बुझ्यौ?” तिनीहरूले उहाँलाई भने: “हजुर, बुझ्यौं।” ५२ त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “त्यसो हो भने स्वर्गको राज्यको विषयमा शिक्षा पाउने हरेक शिक्षक त्यो घरमालिकजस्तो हो, जसले आफ्नो भण्डारबाट नयाँ र पुराना थोकहरू निकाल्छ।” ५३ यी दृष्टान्तहरू बताइसकेपछि येशू त्यहाँबाट जानुभयो। ५४ अनि आफ्नो गृहनगर पुगेपछि उहाँले तिनीहरूको सभाघरमा सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँको कुरा सुनेर तिनीहरू छक्क परे र यसो भने: “यस मानिसले यस्तो बुद्धि र शक्तिशाली कामहरू गर्ने क्षमता कहाँबाट पायो? ५५ के यो त्यही सिकर्मीको छोरा होइन र? अनि के यसकी आमाको नाम मरियम अनि भाइहरूको नाम याकूब, यूसुफ, सिमोन र यहूदा होइन र? ५६ के यसका बहिनीहरू सबै यहाँ हामीकहाँ नै छैनन्‌ र? त्यसोभए, यस मानिसले यी सबै कुरा कहाँबाट पायो?” ५७ त्यसैले तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्न चाहेनन्‌। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “भविष्यवक्ताले सबै ठाउँमा आदर पाउँछ तर आफ्नै इलाका र आफ्नै घरमा भने पाउँदैन।” ५८ तिनीहरूले विश्वास नगरेको हुनाले उहाँले त्यहाँ धेरै चमत्कार गर्नुभएन।
^ मत्ती १३:१९ * अर्थात्‌, “सैतान।”
^ मत्ती १३:२२ * वा, “युगको।”
^ मत्ती १३:३३ * लगभग दस किलो।
^ मत्ती १३:३८ * अर्थात्‌, “सैतानका।”
^ मत्ती १३:४१ * वा, “अरूलाई पाप गर्न लगाउने।”